China One Moniter Miaraka amin'ny orinasa 3 Blades sy mpamatsy | tana
Fampisehoana an-tsary amin'ny tananao. Fantatsika fa ilaina ny fanatanterahana azo antoka fa tsy safidy. Raha ny amin'ny fakana sary an-tsaina ny làlan-drivotra ho an'ny intubations mahazatra sy sarotra dia mila fitaovana iray azonao ianteherana tsirairay sy isaky ny mandeha ianao. Ny laryngoscope horonantsary King Vision dia noforonina tao an-tsainao ao an-tsainao.
Ny lelany dia azo ampiasaina izay manala ny risika amin'ny fandotoana ny lakroa.
Miankina amin'ny teknika tianao sy ny fahasarotan'ny lalan-drivotra ny King Vision dia manana karazany roa. Sela mahazatra izay mitaky fampiasana stylet hitarika ny fantsom-pifandraisana ET. Ny safidy hafa dia ny lozisialy alefa izay ahafahanao mitarika ny fantsom-pifandraisana ET miaraka amin'ilay lelany.
Ny laryngoscope horonan-tsary Mole dia manome sary avo lenta amin'ny tadim-peo ary mampihena ny fanodikodinam-batana malefaka.
Maivana sy mora tazonina miaraka amin'ny afovoan-tany mavesa-danja izay tsy hahatratra ny efijery. Mandeha amin'izay alehanao miaraka amina fonosana mety hipetraka ao am-paosin'ny palitao
Fihodinana diplaoma lehibe
Na inona na inona karazana marary dia azonao atao izao ny manantona ny lasibatra fampidiranao isaky ny zoro, satria afaka mihodina eny ivelany ny mpanara-maso ary mamela fidirana mora foana
Smart Anti-Fogging - Tsy ilaina ny fanomanana mialoha
Ny teknolojia anti-fogging tena izy eo no ho eo dia mitazona fantsona iray manontolo tsy hikorontana fa tsy ny tendron'ny ravin-kazo fotsiny izay miteraka kalitao avo lenta amin'ny fotoana rehetra mandritra ny fampidirana.
Ento miavaka ary avereno miaraka
Tanana azo esorina amin'ny fanadiovana sy famonoana otrikaretina mora
Teo aloha: Moniter iray miaraka amin'ny lelany 10
Manaraka: Anesthesia Laryngoscope
3D Laryngoscope horonantsary vita pirinty